Ogaden News Agency (ONA) – Maamuladii dagmooyinka oo la’isugu keenay xerada TTI ee macalimiinta lagu tababaro iyo wafti QM ka socoda oo tagay Jigjiga
Maamuladii dagmooyinka oo la’isugu keenay xerada TTI ee macalimiinta lagu tababaro iyo wafti QM ka socoda oo tagay Jigjiga
Waxa kusugan Ogadeniya wafti heer caalami ah oo isugu jiray, haya’daha Qaramada Midoobay, iyo saraakiil kasocday wadamada Deeqaha bixiya ee ku bahoobay G8. Dirsta waftidan ayaa ka dabaysay kadib markii la ogaaday in deeqda lasiiyo Itobiya ee loogu talagalay dadka shacabka ah ee tabaalaysan iyo arimaha horumarinta in loo adeegsaday arimo mulatari, siiba dalka Ogadeniyaa ayaa deeqanah loogu talagalay lagu biilaa maxaysatada daacada u ah Cabdi Iley dhiigyacabka Ogadenya ee lagu magacaabo liyu booliska, dadkuna ugu yeedhaana Hawaarin, kuwasoo deeqda caalamka lagu qalabeeyo, raashinka qamidida ahana lagu biilo.
Wararka aan ka heleyno jigjiga ayaa sheegay in cidamo fara badan loodiyariyey waftida markay soo gadheen maagalada loona sheegay in alshabaab iyo alqacida joogan Ogadeniya oo amnigooda la sugayo taasoo ujeedada laga leeyahay ay tahay siday ku tilmaameen dadka waxa garadka ah in lagaga hortagayo in xog rasmi ah ay helaan wafdigan socda ama ay arkan xaaladda dhabta ah ee dadka shacabka ah ee caadiga ah ay ku noolyihiin.
waxaa loo diyariyey goobo laga sii shaqeeyey oo dadka lagu sii ururiyey, sida Qabribaxaya, Shiniile, Jinacasanay, xaafada magalada Jigjiga. Wararka ayaa intaa ku daray in turjumaano laraciyey katirsan maxaysatada Hawaarinta iyo shaqaalo hoosadaka xafiska Cabdi ubo taasoo sii adkeen doonta in lahelo xog dhab ah.
Waxaa sidoo kale magalada Jigjiga lagu soo ururiyey maamulada dagmooyinka Ogadeniya. Gudoomiye-yaasha iyo madaxa xafiisyada ayaa kusugan xerada loo yaqano TTI -da ee lagu tabobaro macalimiinta, waxana ku xareysan yahiin muda 5 maaalmood ah. Maamuladan oo qaar ka mid ah aan kula xidhiidhnay khadaka telefanka ayaa noo sheegeen in macalimiin Tigree ah ay wax barayaan, lana barayo waxay ku sheegeen sida looga hortago ururda mucardka ah iyo ka hortaga qalalaasaha. Waana arin Itobiya oo idil ka socota, ka dib markay dareemeen Wayaanaha inuu shacabka aad u kacsan yahay oo mucaaradka ay u midoobeen.
Xubnahan aan la xidhiidhnay oo codsaday in aan lamagacaabin, ayaa raaciyay in loo dajinayo qorshe cusub oo lagu gumaadayo dadka shacabka ah. Mar aan waydiinay; maad diidaan hadii la’idin leeyahay dadka gacan kulul halagu qabto ayuu noogu jawabay mid kamid ah; “Hadaan ka hadalo naftanada ayaan ku wayaynaa. Waxan rabana in aan biilka caruurtana u helo jeel Ogadena aanan galin.”
kkkkkkkkkkkkkkkkkkkk war ragu ragii maamulada ahaan jiray u ekaa sida loo jaadi ayaaba cajiib ah. war jaadka ka kaca oo kor fiiriya